Dot Laser Module, Laser Red Dot, Red Laser Diode Mugadziri muChina
Tsanangudzo:Dot Laser Module,Laser Tsvuku Dot,Tsvuku Laser Diode,Tsvuku Laser Modules,,
 HomeProductsLaser ModuleDot Laser Module
Dot Laser Module (Total 20 Products)
Zvigadzirwa zve Dot Laser Module , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Dot Laser Module , Laser Tsvuku Dot vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Tsvuku Laser Diode R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Iyi laser module inosanganisira optic, laser diode uye driver driver. Kwakanakisa kuvhunduka kuramba uye kupisa kupisa iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera zvishandiso, kuenzanisa uye...
Iyo dotti iyo 830nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe, inoda yakasarudzika infrared kamera kuti icherechedze.Iyo yakawanda inoburitsa simba ndeye, iyo inopenya yakajeka iyo dot. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina...
Unit Price: 2~20USD
Iyi compact tsvuku laser diode module inozvimiririra-iine yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu, mune compact muviri. Iyi mini tsvuku laser diode module inonyanyo shandiswa kune mazhinji maindasitiri maficha senge kurongedza uye kuisa. Iyi laser...
Unit Price: 5~20USD
Unit Price: USD 5 - 9 / Piece/Pieces
Iyi diki tsvuku laser diode module inozvimiririra-iine yakasanganiswa laser mutyairi wedunhu, mune compact muviri. Iyi mini tsvuku laser diode module inonyanyo shandiswa kune mazhinji maindasitiri maficha senge kurongedza uye kuisa. Iyi laser module...
Unit Price: 1.3~4
Unit Price: 1.1~4
Iyo dotti iyo 980nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe, inoda yakasarudzika infrared kamera kuti icherechedze. Iyo yakawanda inoburitsa simba ndeye, iyo inopenya yakajeka iyo dot. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina...
Unit Price: 10~100
Iyo dot iyo 850nm infrared laser module yakaburitswa isingaonekwe, inoda yakakosha infrared kamera kuti icherechedze. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 850nm...
Unit Price: 8~100
780nm laser diode module iri padyo neiyo infrared wavelength, inoda yakakosha infrared kamera kuti itarise. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 780nm Simba...
Iko dot iro iro 808nm infrared laser module rakaburitswa harioneke, rinoda yakasarudzika infrared kamera kuti itarise. Iyi laser module inonyanyo shandiswa pane muchina chiratidzo, kuongorora, uye kunyatso kuenderana. Tsanangudzo: Wavelength: 808nm...
Unit Price: 10~99
520nm girini laser module's mwenje inoteedzerwa yakananga ne laser diode. 520nm ine yakadzikama, inogona kushanda ichienderera kwenguva yakareba, girini tambo mwenje yakakwenenzverwa uye yakajeka, uye inogona kushandiswa zvakanyanya mukutsvaga...
Unit Price: 5~9
China Dot Laser Module Vatengi
Changchun Realpoo Photoelectric Co., ltd inyanzvi yekugadzira ma laser modules munyika. Yedu kambani inowana ruzivo rweinjiniya, Nyanzvi yekugadzira tambo, yakanaka muchina wekuyedza pamwe nechiridzwa chemberi. Nezvakanakira, tinopa laser module, laser diode, laser mwenje, laser danho mwenje, laser peripheral chigadzirwa, pcb redunhu dhizaini uye kusimudzira uye zvichingodaro. Tinogona kuona yakakwira vanokwanisa mwero.
Dot Laser Module Laser Tsvuku Dot Tsvuku Laser Diode Tsvuku Laser Modules Laser Module